बजारमा गुणस्तरहिन म्याट्रेसको बिगबिगी डक्टर देखाएर झुक्यायो किङ कोइलले » होमल्याण्ड खबर
admin August 16, 18 1:21 pm
अर्थोपेडिक प्रचार गरिए पनि यसको प्रयोगले उल्टो ढाड–कम्मर दुख्ने तथा शरीरिरमा थकानको महशुस हुने व्यापक गुनासो आए पछि होमल्याड मिडियाले केही स्याम्पल म्याट्रेस खरिद गरेको थियो । होमल्याण्डका पाठकहरुले बजारमा भएका गुणस्तरहिन म्याट्रेसको बारेमा लेख्नका लागि बारम्बार अनुरोध गरिए पछि होमल्याण्ड मिडियाले केही म्याट्रेसको खरिद गरेको हो । स्मरणीय छ, नेपाल नाप तौल विभागले अन्य ३० भन्दा बढी किसिमका सामग्रीको मापदण्ड तोके पनि म्याट्रेसको भने तोकेको छैन् । यहि मौकामा नीतिगत अभावको फाइदा उठाउँदै विश्व चर्चित भनिने किङ कोइल ब्राण्डको नाममा गुणस्तरहीन म्याट्रेसको बिगबिगी भएकोे पाएको हो । यो म्याट्रेस नेपालका लागि टेक्नोटेक प्रा. लि.द्वारा बिक्री हुदै आएको छ ।
स्वस्थ्यबद्र्धक तथा उपचारात्मक म्याट्रेसको खोजी गरिरहेको बेला उपभोक्ता भने ब्राण्डका नाममा गुणस्तरहीन म्याट्रेसको मारमा परेका छन् । यसरी भेटिएका म्याट्रेसको प्रोडक्ट डिटेल्समा गुणस्तरिय र स्वस्थबद्र्धक उल्लेख गरिए पनि प्याकेजिङमा भने पि–फम प्रयोग भएको पाइएको छ । लक्जरियस मेडिकेटेड तथा अर्थोपेडिक भनेर सुपर फमको प्रयोग गरिएको भनिए पनि म्याट्रेसभित्र हानिकार फम तथा केमिकल प्रयोग गरिएको भेटिएको छ । डक्टर म्याट्रेसको नाममा स्टेथेस्कोप र एप्रोन सहित किङ कोइलले प्रिमियम ग्लोवल ब्राण्डको नाममा गरिरहेको बिक्री वितरण कानुनी दृष्टिले पनि दण्डनीय मानिन्छ ।
होमल्याण्डले खरिद गरेको अर्थो सेरिजको डक्टर म्याट्रेसमा अर्थोपेडिक सुपर फम प्रयोग भएको उल्लेख गरिए पनि म्याट्रेसभित्र स्क्रयाब फमकाफमको वेस्टेज टुक्रा जोडेर बनाएको पाइयो । यस्तै फमका वेस्टेज टुक्रा कम्पाइल गरी बनाएको म्याट्रेस र त्यसमा प्रयोग गरिने केमिकल अझ बढी हानिकार हुने अर्थोपेडिसियनको भनाइ छ । विज्ञहरुका अनुसार, किङ कोइलले यसरी प्रयोग गरेको स्क्रयाब फमका टुक्रा र टिभी फ्रिजको प्याकेजिङका लागि पनि हानीकारक मान्न थालिएको छ । स्क्रयाब फम प्रयोग गरेर बनाएको म्याट्रेस बन्डेड भन्नु पर्नेमा कहि कतै बन्डेड नाम उल्लेख छैन
बयोधा अस्पतालका सिनियार अर्थो सर्जन डाक्टर विमल कुमार पाण्डे एयर म्याट्रेसका लागि मात्र डाक्टर लेख्न पाइने अन्यथा अन्तराष्ट्रिय प्रावधान नभएको बताउँछन् । तर नेपालमा अनुगमनको अभावका कारण नियम विपरीत जनस्वस्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने काम हुने गरेको छ । ‘यो जनस्वस्थ्यमाथि ठूलो धोका हो ।’ पाण्डेले भने ।
यस्तै, नेपाल मेडिकल कलेजका अर्थोपेडसियन डा. उमेश ठाकुरले पनि गुस्तरहीन म्याट्रेसलाई अर्थोपेडिक भनी बेच्नु भ्रमपूर्ण भएको जनाउँदै व्यापारका लागि जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनु भयो । अर्थोपेडिक म्याट्रेसका विशेषता र बनाइने इलेमेन्ट नै अलग हुने बताउँदै गुणस्तरहिन म्याट्रेस अर्थोपेडिक हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
म्याट्रेस बजारमा किङ कोइल ब्राण्डले आफूलाई विश्वमा नै दोश्रो लोकप्रिय भएको दावी गरेको छ । यस्तै यसको दावीअनुसार, यो विभिन्न १०० भन्दा बढी देशमा बिक्री हुदै आइरहेको छ । नेपालमा यसको आधिकारिक बितरक रहेको टेक्नोटेक प्रा. लि.का अमित अग्रवालसँग होमल्याण्डले सम्पर्क गर्दा कम्पनीबाट नै यस्तै आउने बताएका छन् । कम्पनीले पठाएको आफूहरुले विक्री वितरण मात्र गरेको बताउँदै अमितले भारतमा रहेको अफिसिय नम्वरमा फोन गर्नोस् भन्दै पन्छिए । अमितले दिएको मोवाइल तथा ल्याण्ड लाइन नम्वरमा होमल्याण्डले पटक पटक सम्पर्क गरी अफिसियल प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । भारतीय नम्वर +०९११२०४७३७७०० मार्फत लिखित अफिसियल प्रतिक्रिया पठाउने जनाए पनि यो समाचार तयार पर्दासम्म होमल्याण्डले कुनै प्रतिक्रिया पाएको छैन ।